Phandeeyar Lawful Interception Workshop
The term lawful interception (LI) refers toagovernment’s legal rights to collect information on the private communications and data of its citizens. Most countries have specific LI rules outlining when the government can intercept and access its citizens communications. Clear guidelines are necessary to ensure the government does not violate its citizens’ rights–including the right to privacy and to freedom of expression.
Why is Phandeeyar concerned about lawful interception?
Phandeeyar’s mission is to help harness the promise of Myanmar’s technology revolution to foster positive change and development in the country. In order for people to fully take advantage of growth in the technology sector, it is necessary to ensure that the tech space is safe and that privacy rights are protected. The Myanmar government recently announced it would be soliciting public input for the drafting of LI laws and Phandeeyar brought together important CSO stakeholders to educate and brainstorm about what the new legislation must include.
Who was at the Lawful Interception Workshop?
In addition to over 40 CSO leaders, Phandeeyar welcomed LI expert Lucy Purdon from the Institute for Human Rights and Business to educate participants of the principles of LI. 88 Student Generation leader Ko Pyo Cho spoke, and MIDO’s Htaike Htaike and MCRB’s Thi Thi contributed to the presentations.
Participants left withaclearer understanding of the importance of LI legislation. They were familiarized with the international digital community’s LI standards, as well as the advantages and disadvantages of LI. Going forward, they will be able to participate in public consultation and make arguments on LI.
Written by Lucienne Oyer and translated by Michael Suantak, Photo credit: Ko Aung Win Htut
ဇှနျလ ၂၃ ရကျနတှေ့ငျ Phandeeyar, MCRB, and MIDO တို့မှ တရားဝငျ ကွားဖွတျ နားထောငျခွငျး ဆိုငျရာ အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲကို အရပျဘကျ လူမှုအဖှဲ့အစညျး ခေါငျးဆောငျမြားအတှကျ ပူးပေါငျးပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။
တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျးဆိုတာ ဘာလဲ?
တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျး ဆိုသော စကားရပျသညျ အစိုးရမှ ပွညျသူမြား၏ ကိုယျရေးကိုယျတာ ဆကျသှယျမှုနှငျ့ အခကျြအလကျမြားကို ဥပဒအေရ ရယူပိုငျခှငျ့ကိုရညျညှနျးပါသညျ။ နိုငျငံအမြားစုတှငျ ၄ငျးလုပျပိုငျခှငျ့ကို ဘယျအခြိနျမြိုးတှငျပွုလုပျနိုငျကွောငျး တိကသြော စညျးမြဥျးမြား ရှိကွသညျ။
ပွညျသူတို့၏ အခှငျ့အရေးအပါဝငျ ကိုယျရေးကိုယျတာ လှတျလပျခှငျ့နှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျော ပွောဆိုခှငျ့မြားကို အစိုးရမှ လေးစားရနျ၊ မဖောကျဖကျြ မကြူးလှနျရနျ ရှငျလငျးတိကသြော လမျးညှနျမှုမြား အထူးလိုအပျပါသညျ။
ဘာကွောငျ့ ဖနျတီးရာက တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျးကို အလေးထားစိုးရိမျပူပနျရတာလဲ?
ဖနျတီးရာ၏ ရညျမှနျးခကျြသညျ ပွောငျးလဲတိုးတကျလာသော မွနျမာ့နညျးပညာတျောလှနျရေးကို အသုံးပွု၍ ကောငျးသောအပွောငျးအလဲနှငျ့ နိုငျငံ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရနျဖွဈပါသညျ။ နညျးပညာကဏ်ဍ တိုးတကျခွငျးကို ပွညျသူတို့မှ အကြိုးရှိစှာ အသုံးပွုနိုငျရနျအတှကျ နညျးပညာနယျပယျ လုံခွုံမှုနှငျ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ လှတျလပျခှငျ့မြားကို ကာကှယျပေးရနျလိုအပျပါသညျ။
မွနျမာအစိုးရကလညျး တရားဝငျကွားဖွတျနားထောငျခွငျး ဥပဒမေူကွမျးအပျေါ အမြားပွညျသူတို့မှ ပါဝငျဆှေးနှေးအကွံပွုစမေညျ ဖွဈကွောငျး မြားမကွာမီအခြိနျတှငျ ကွငွောသောကွောငျ့ ဖနျတီးရာမှလညျး အရေးပါသော အရပျဘကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမှ ခေါငျဆောငျမြားနှငျ့ လာမညျ့ ဥပဒတှေငျပါဝငျသငျ့သညျ့ အခကျြအလကျမြားကို အတူတကှဆှေးနှေးတိုငျပငျခွငျးနှငျ့ သငျကွားခွငျးမြားကို ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။
ဘယျသူတှေ တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျးဆိုငျရာ အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲမှာ ပါဝငျသလဲ?
အရပျဘကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမှ ခေါငျဆောငျ အယောကျ (၄၀) နှငျ့အတူ the Institute for Human Rights and Business မှ ဆရာမ Lucy Purdon ကို ဖနျတီးရာမှဖိတျချေါပွီး တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျး၏ အခွခေံသဘောတရားမြားကို သငျကွားစခေဲ့ပါသညျ။ ထို့အပွငျ 88 Student Generation မှ ခေါငျးဆောငျ ကိုပွုံးခြို၊ MIDO မှ မထိုကျထိုကျအောငျနှငျ့ MCRB မှ မသီသီသိနျး တို့မှလညျး အတှအေ့ကွုံမြား၊ သငျပွခကျြမြား မြှဝခွေငျးဖွငျ့ ပါဝငျအားဖွညျ့ခဲ့ပါသညျ။
အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲမှ ဘာရလဒျတှေ ထှကျလာသလဲ?
တကျရောကျသူမြားမှ တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျး ဥပဒေ၏ အရေးပါခွငျးကို ပိုမိုနားလညျလာကွပါသညျ။
ဤအလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ သကျရောကျသူမြားသညျ တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျးဆိုငျရာ နိုငျငံတကာရှိ နညျးပညာအသိုငျးအဝိုငျးမြား၏ စံနှုနျးထားမြား၊ ၎င်းငျး၏ကောငျးကြိုး၊ ဆိုးကြိုးမြားနှငျ့ အကြှမျးတ၀ငျ ရှိလာပွီဖွဈသညျ။ တရားဝငျ ကွားဖွတျနားထောငျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ သူတို့သညျ လူထုတှဆေုံ့ပှဲတှငျ အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ငွငျးခုံဆှေးနှေးနိုငျပွီဖွဈပါသညျ။
Lucienne Oyer မှ ရေးသားပွီး ကိုမိုကျကယျစှနျသ မှ ဘာသာပွနျပါသညျ။
ဓာတျပုံမှတျတမျးတငျသူ – ကိုအောငျဝငျးထှဋျ
ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် Phandeeyar, MCRB, and MIDO တို့မှ တရားဝင် ကြားဖြတ် နားထောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?
တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်း ဆိုသော စကားရပ်သည် အစိုးရမှ ပြည်သူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်သွယ်မှုနှင့် အချက်အလက်များကို ဥပဒေအရ ရယူပိုင်ခွင့်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် ၄င်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘယ်အချိန်မျိုးတွင်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း တိကျသော စည်းမျဉ်းများ ရှိကြသည်။
ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးအပါဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်များကို အစိုးရမှ လေးစားရန်၊ မဖောက်ဖျက် မကျူးလွန်ရန် ရှင်လင်းတိကျသော လမ်းညွှန်မှုများ အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ဘာကြောင့် ဖန်တီးရာက တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းကို အလေးထားစိုးရိမ်ပူပန်ရတာလဲ?
ဖန်တီးရာ၏ ရည်မှန်းချက်သည် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော မြန်မာ့နည်းပညာတော်လှန်ရေးကို အသုံးပြု၍ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနှင့် နိုင်ငံ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာကဏ္ဍ တိုးတက်ခြင်းကို ပြည်သူတို့မှ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာနယ်ပယ် လုံခြုံမှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာအစိုးရကလည်း တရားဝင်ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်း ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် အများပြည်သူတို့မှ ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပြုစေမည် ဖြစ်ကြောင်း များမကြာမီအချိန်တွင် ကြေငြာသောကြောင့် ဖန်တီးရာမှလည်း အရေးပါသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်ဆောင်များနှင့် လာမည့် ဥပဒေတွင်ပါဝင်သင့်သည့် အချက်အလက်များကို အတူတကွဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် သင်ကြားခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘယ်သူတွေ တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်သလဲ?
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်ဆောင် အယောက် (၄၀) နှင့်အတူ the Institute for Human Rights and Business မှ ဆရာမ Lucy Purdon ကို ဖန်တီးရာမှဖိတ်ခေါ်ပြီး တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားများကို သင်ကြားစေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် 88 Student Generation မှ ခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချို၊ MIDO မှ မထိုက်ထိုက်အောင်နှင့် MCRB မှ မသီသီသိန်း တို့မှလည်း အတွေ့အကြုံများ၊ သင်ပြချက်များ မျှဝေခြင်းဖြင့် ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဘာရလဒ်တွေ ထွက်လာသလဲ?
တက်ရောက်သူများမှ တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်း ဥပဒေ၏ အရေးပါခြင်းကို ပိုမိုနားလည်လာကြပါသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သက်ရောက်သူများသည် တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာရှိ နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ စံနှုန်းထားများ၊ ၎င်း၏ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများနှင့် အကျွမ်းတ၀င် ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ တရားဝင် ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သည် လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Lucienne Oyer မှ ရေးသားပြီး ကိုမိုက်ကယ်စွန်သ မှ ဘာသာပြန်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်သူ – ကိုအောင်ဝင်းထွဋ်